Ahoana ny fomba hahitana ireo naoty iOS 9 ao amin'ny Yosemite OS X | Vaovao IPhone
Ilay fampiharana vaovao IOS 9 Fanamarihana Niova be izy io ary nihatsara daholo. Ankehitriny isika dia afaka manao sary miaraka amin'ny borosy isan-karazany amin'ny naoty, afaka manampy rakitra multimedia ary mizara izany amin'ny fampiharana bebe kokoa. Ho an'ireo mpampiasa toa ahy dia betsaka lavitra noho ny ampy izany ary azoko antoka fa ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa ihany koa io, na dia marina aza fa ho an'ny sasany mitaky ny fanovana dia mety ho tsy ampy.
Izay mpampiasa mampiasa ny fampiharana iOS Notes, dia manavao ny iPhone, iPod, na iPad ao amin'ny iOS 9, ary manandrana miditra amin'ireo naoty ireo amin'ny Mac miaraka amin'ny OS X Yosemite, dia tsy maintsy ho gaga: Yosemite dia tsy tohanana miaraka amin'ireo naoty vaovao. Dia inona no ataontsika? Azontsika atao ny mandefa ny ampahany amin'ireo naoty amin'ny alàlan'ny paositra, saingy lasa manelingelina zavatra iray ity izay tokony ho mandeha ho azy kokoa. Soa ihany fa saika ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia manana vahaolana.
Ny vahaolana dia tsy iza fa ny fidirana amin'ny kinova an-tranonkala an'ny Notes. Izao no hataontsika:
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny naoty iOS 9 avy amin'ny Yosemite
Manokatra izahay mpitety avy amin'ny Internet.
Handeha isika www.icloud.com.
Niditra izahay -tsoratra.
Araka ny hitanao dia tsy ho mora kokoa izany. Ny hany ilainao dia ny mahafantatra fa misy izany mety hitranga, zavatra izay tsy fantatro hatramin'ny vao haingana. Ny fampiharana Notes izay ho hitanao ao amin'ny icloud.com tsy mitovy amin'ny iOS 9, fa tsy tokony hatahotra ianao. Ny OS X El Capitan dia tsy mitovy ankehitriny ary mety tsy ho ela, na dia manantena aho fa ho avy izany. Amin'izao fotoana izao, amin'ny kinova El Capitan, azo atao ny manampy sary sy sary (sintomy fotsiny ao anaty naoty), saingy tsy azo atao ny misintona freehand na miaraka amin'ny mpanapaka izay misy ao amin'ny iOS 9. Mety hieritreritra ianao fa tsy afaka manao sary tsara amin'ny trackpad na totozy izahay, saingy afaka mampiasa sonia amin'ny Preview, ka… inona no andrasanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Nohavaozina amin'ny iOS 9 ary tsy afaka mahita ny naotinao amin'ny Yosemite? Misy làlana
Salama, azafady noho ny fanontaniana, na dia tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitra ankehitriny aza, voalaza fa ny IOS 9 dia manana safidy hametraka rantsan-tànana roa amin'ny klavier hampihetsika ny safidin'ny lahatsoratra iray ary hanova na hamafa azy, fa amin'ny iPhone 6 Miampy amin'ny iOS 9 dia tsy mandeha, ity hetsika ity dia natao ho an'ny 6s ?.
Valiny tamin'i Solomona
Salama, Solomon. Amin'izao fotoana izao dia tsy miasa afa-tsy amin'ny iPad izy io. Raha tsy ovaina amin'ny ho avy izy io dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus (an'ny telefaona). Ho an'ny iPhone dia misy amin'ny betas voalohany, saingy nijanona tsy ho toy izany aho mieritreritra amin'ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona (sy ny daholobe voalohany).
Raha ny marina dia tsy azoko hoe maninona no tsy misy io, raha tsy hoe manome teboka fanampiny ho an'ny iPhone 6s, zavatra iray izay toa tsy mety, mazava ho azy.
Momo dia hoy izy:
rangahy tsy takatrao, mora azo izany ka amidinao ny iphone-nao taloha dia iphone 6 ary mividy ilay vaovao ianao, izay iphone 6s hanavao izany mazava ho azy
Mamaly an'i Momo
Edy edgar dia hoy izy:
Salama Pablo, dia nanavao ny iPhone ho an'ny IOS 9 fotsiny aho ary gaga fa tsy nataon'i Siri intsony ny feo 2 izay efa fanaony, ankehitriny dia mihetsiketsika fotsiny izy io, ara-dalàna ary izay azoko atao hanaovana ny feon-kipantson'izy ireo fony izy miantso hiverina any Siri.
Valiny tamin'i Edy Edgar
Salama Edy. Ara-dalàna izany. Amin'ny iPad dia feo izy ary rehefa miteny ianao dia mandre an'i Siri koa. Fiovana io.
Misaotra Pablo, nieritreritra fotoana fohy aho fa nisy glitch tamin'ny iPhone.
Microsoft CEO dia mampiasa "iPhone Pro" ho an'ny demo an'ny Outlook ho an'ny iOS
Ny voalohany amin'ny Apple Stores dia misokatra any Bruxelles